Nezvedu - Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
Fujian Joborn Machinery Co., Ltd. inowana mu "China ibwe guta" -china, shuitou, inogara nzvimbo inosvika 60 maeka, iine anopfuura zviuru makumi maviri emamirimita emamita emazuva ano emiti zvirimwa uye anopfuura anopfuura 4000 mativi metres echivako chekutonga, iri kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi mune rimwe rematombo ekugadzira michina yekugadzira. Akaunganidza hupfumi hwechiitiko, hwakanakisa tekinoroji uye zero-chinhambwe ese-kutenderera masevhisi anovimbisa kuti kambani yakawana musika wakanaka mukurumbira.
Iwo makuru zvigadzirwa iSQC450 / 600 / 700-4D bhiriji yekucheka muchina ,, SQC1200-4D yepakati bhiriji yekucheka muchina, SQC2200 / 2500 / 2800-4D block yekucheka muchina, SQ / PC-1300 yakakosha yakaumbwa muchina wekunyora, SPG resin dzakateerana otomatiki kupora. muchina zvichingodaro. Hunhu hwekutanga chinangwa chekambani yedu kambani yakamisikidza Dhipatimendi rehunyanzvi hwekudzora mhando, yakagadzirirwa michina yekuyera yekuyera, maitiro ekuyedza akaomarara, kubva pakutenga zvinhu zvakasvibirira kusvika pakupedzisa imba yekuchengetera; maitiro akasiyana siyana anonyatso kudzorwa, kuona kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa zvaive zvepamusoro.
Kambani iri kuchengetedza mweya we "wekutanga nevanhu, ponesa nehunhu, kuhwina neakanakisa, nyowani nehunhu", mune ramangwana kambani ichapa hunyanzvi hwehunyanzvi uye maitiro anogara achisimudzira mhando yebasa kune simba "China yekugadzira. 2025 ", yekumutsiridza China matombo ekugadzira zvigadzirwa uye nekuedza kusinganeti.
JOBORN Machinery yakavaka nyanzvi timu ine hupfumi ruzivo mumatombo michina kugadzira. Kwemakore anopfuura makumi maviri, anopfuura makumi matanhatu ezviuru zvigadzirwa zvematombo ekugadzira ruzivo rwakafuma uye hunyanzvi hwekuunganidza zvakagonesa tekinoroji yekambani kugara iri pamberi pevezera rayo, ichigadzira mukana mukugadzirwa kwetekinoroji, uye nekukurumidza Kuratidzira kwazvino dombo rekugadzira tekinoroji uye mutengi zvinodiwa kugadzirwa kwezvigadzirwa, kugadzira tekinoroji uye zvigadzirwa pamberi peiyo indasitiri.
Joborn michina inochengetedza bhizimusi musimboti mweya we "wekutanga nevanhu, ponesa nehunhu, kuhwina nekunakisisa, nyowani nehunhu". Tora kudiwa kwevatengi senzvimbo yepakati, tora kugutsikana kwevatengi senzvimbo yekutanga, ine yekutanga-kirasi kumhanya, yekutanga-kirasi tekinoroji, yekutanga-kirasi mafungiro ekuwana "kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi, kupfuura indasitiri standard" sevhisi yebasa, ipa vatengi vane yakazara pre -sale, sale, iyo yese maitiro eanotengeswa-sevhisi